DIYAARADII DHACDAY EE AIR FRNACE OO RAAD IYO RUUX AAN WALI LA HAYNIN | Toggaherer's Weblog
Posted by: toggaherer on: June 5, 2009
Diyaaradii dhacdey ee nooceedu ahaa Airbus AF 447 lagana lahaa dalka France ayaan ilaa hada aan la haynin wax raad iyo ruuxa oo ka hadhey, hadii ay noqoto qoloftii diyaarada iyo hadii ay noqoto dadkii saarnaa geeri iyo nolol midnaba.
Diyaaradan oo habeenkii Isniintu soo galeysay ee 01-06.2009 saacadu markey aheyd kowdii habeenimo geeska Africa ka soo kacdey, caasimada dalka Brasil ee Rio de Janeiro, kuna socotey caasimada dalka Fracne ee Paris oo ay faadhisan laheyd 12. 30 saac G. Afirca, ayaa waxa ay raadarada ka libidhey mar qudha markii saacadu ay aheyd 04.30 Subaxnimo., markaas oo ay dul mareysay Badweynta Atlantica kuna dul beeganeyd jasaa`irka Fernando de Noronha, ee dhaca dalka Brasil.
Diyaaradan oo sidey 216 qof oo rakaaba iyo 12 shaqaalaha diyaarada ah ayaa waxa markaa la waayey daqiidado ka hor laga helay fariimo ah nooca iskood isu dira marka ay diyaarido wax noqoto. Fariihaas oo sheegayay cilad farsamo.
Muran ayaa ka taagan sababta diyaaradu u burburtey, waxaase loo badinayaa oo raga aqoonta u leh shilalaka diyaaraduhu ku doodayaan in shilka ay u sabab aheyd, cimalada oo xumeyd, daruuro kakan iyo hilaacyo danab wata oo diyaaradu la kulantey.
Raga qaar u badan Pilots diyaaradaha haga ayaa ku doodaya in aanu hilaac iyo danab ridi karin diyaarad ah noocyadan danbe ee casriga ah, waxaa dad tiro yari sheegayaan in aan meesha laga saari karin Qarax bombo oo argagixiso.
Si kastaba jaho wareer ayaa jira ku saabsan wax kelifey in mar qudha diyaaradan la waayo, iyo sababta keliftey in Pilotsku aaney soo sheegin wax May Day ah ama caalamad ah shil ah.
Waxaa diyaaradan wadey oo Pilotka kowaad ka ahaa 58 jir xiribo cadaadiya oo mudo 21 sano ah shaqadiisu aheyd inuu cirka madow diyaaradaha mariyo, labada nin ee la wadey diyaarada ayaa ahaa, rag dadoodu ahed 37 jir iyo 33 oo iyaga laftoodu wax badan ku shaqeeyay Pilotnimo.
Inkasta oo dadka baadigoobka ku jiraa ay markii hore sheegeen iney heleen qeybo ka mida burburkii diyaarada iyo saliid ku daadatey bada dusheeda, hadana waxa maanta dib loo cadeeyey in qurubyada la helay iyo saliida la arkey aanu midkoodna ka iman diyaarada burburtey. Ciidamada gurmadka ee Brasil oo markii hore sheegey iney heeleen qurubyo alaabo diyaarada ah ayaa hada sheegaya in waxa ya heleen uu ahaa wax ka yimid Markab laga yaabo inuu beri hore qaraqmey.
Waxaa dhawaan la sugaayaa inuu soo gaadho aaga shilka lagu tuhunsan yahey markab sida doonta biyha hoostooda quusta ee lagu magacaabo Nautile oo laga leeyay dalka France. Doontan yar oo qaada sadex qof ayaa ah doontii ugu horeysay ee sanadkii 1985kii, ku guuleystay iney soo hesho burburkii markabkii Titanic ee 1912 ku haligmey Badweynta Atlantica. Doontan oo quusta biyaha hoostooda in ka badan 6000 mitir ayaa waxey aag baaxad weyn ka baadi goobi doonta aalada lagu magacaabo Sanduuqa Madow(Black Box). Ee inta badan lagu ogaado sababta keenta shilalka diyaaradaha.
Rajada laga qabo in la helo sanduuqa ayaa aad u yar. Dhanka kale waxaana hada lagu jiraa baadi goob laxaad weyn oo lagu baadi goobayo raq iyo ruux wixii ka hadhey Diyaarada haligantey. Waxaana baadi goobka wada diyaarado iyo maraakiib laga helay wadamo dhawra oo Brasil u horeyso.
Shilkan ayaa lagu macneeyay kii u xumaa ee abid ku dhaca Diyaarad marka laga eego helid la`aanta burburkii diyaarada iyo sababta shilka keentey oo aan la fahmi karin ilaa hada.
Waxaa soo akhiryey, soona ururiyey